I-B & H's New Full-Frame Camera System captures Photograph Extrodental | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Okufakiwe » I-B & H's New Full-Frame Camera System captures Photograph Extrodental
I-B & H's New Full-Frame Camera System captures Photograph Extrodental
Isithombe esilula singasho okuningi, futhi ukufaka isithombe kungukhiye ekuxhumaneni nezidingo zokudala ukuze kukhiqizwe futhi kukhuliswe ababukeli. Noma ngubani osebenza embonini yezokusakaza uyaqonda ukuthi izithombe ezingemuva kokuqukethwe kwevidiyo zazo zingakhuluma ngobuningi bolwazi ezilalelini eziqondayo. Futhi nge B & H's Uhlelo Olusha lwe-Full-Frame Camera, ochwepheshe bezokusakaza ngeke babe nenkinga ekuthumbeni imicabango yezithameli zabo.
B & H (Blimie & Herman) ungumthengisi wezithombe nezithombe zaseMelika. Le nkampani yasungulwa okokuqala ngonyaka we-1973, futhi iqhuba ibhizinisi ngokuthengiswa kwabathengi nge-e-commerce online, ibhizinisi ngokuthengisa ibhizinisi, nendawo yalo eyodwa yezitolo eManhattan, eNew York. B & H isebenza njengomhlinzeki osunguliwe wemishini yokukhiqiza imidiya ngokukhetha okungalingani kwemikhiqizo nemikhiqizo. Ngokuhlanganisa nokuhlukaniswa kwabo kwe-Studio ne-B2B, umthengisi uyakwazi ukuhlinzeka amakhasimende ngokufinyelela kobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu nobungcweti bawo wonke amamakethe wokudala okuqukethwe. Futhi imakethe ekhulayo yokuqukethwe efana nemboni yezokusakaza izothuthukisa ngaphezu kokukhishwa kohlelo lwayo lwekhamera egcwele kakhulu, I-Sony PXW-FX9 XDCAM 6K.
B & H's Sony Uhlelo lwekhamera ye-PXW-FX9 XDCAM 6K Full-Frame Camera
Uhlaka oluphelele Sony FX9 inika abasebenzisi amandla okubamba isithombe esingajwayelekile / isayensi yemibala nokuqapha okuningi kanye nokuqoshwa kwamakhono nge-version 2.0 ye-FX9 firmware noma i-VENICE firmware. Akukhathalekile ukuthi umsebenzisi uphonsa yini imibhalo, imicimbi, i-TV yangempela, imfundo, noma imikhiqizo ehlangene. Ngaphezu kwe Sony sika PUhlelo lweKhamera ye-XW-FX9 XDCAM 6K Full-Uzimele Uhlelo lwekhamera ye-lens enamandla enamandla futhi eguquguqukayo, futhi ifaka uhlaka olugcwele, inzwa engaphezulu kwe-4K Exmor R CMOS. Le nzwa ivumela umsebenzisi ukuthi abambe izithombe ze-6K ngobunzulu bensimu, futhi i-E-Mount ka-PXW-FX4 yenziwe ngamatshe angenasisekelo futhi evumela ikhasimende ukuthi lisebenzise ama-lens e-E-Mount.
The I-PXW-FX9 okokufaka nokukhipha kufaka phakathi i-12G-SDI ne I-HDMI Imiphumela ye-4K, okukhipha i-3G-SDI HD, ne-genlock ne-timecode lapho usebenzisa ukusetha kwamakhamera amaningi. Uhlelo lwe-Fast Hybrid AF autofocus luvumela ukugxilwa okuyiqiniso futhi luye livumele ukutholwa kobuso ukuthola ngokuzenzakalelayo ifomu lomuntu ngamaphuzu angama-561 okutholakele. The I-PXW-FX9 ingafinyelela ukuqiniswa kwesithombe okuthuthukile isebenzisa i-gyroscope yayo yangaphakathi ukuthola isibhamu ukuze ibukeke ibukeka sengathi kusetshenzisiwe i-gimbal. Ukurekhodwa komsindo wesiteshi esine-4 kuvumela umsebenzisi ukuba asebenzise imakrofoni yangaphandle futhi aqophe umsindo ophakathi nama-mics angaphakathi ngasikhathi sinye.
Sony'S I-PXW-FX9 ifaka uhla olungamandla we-15-stop bese uqopha i-10-bit 4: 2: 2 kuya kwe-XQD slats khadi yemidiya emibili esekela ukurekhoda ngasikhathi sinye futhi edlulisayo, kanye nezindlela zokurekhoda eziningi ezibonisa amafayela asebenza njengommeleli. Uhlelo lwekhamera lungarekhoda i-UHD (3840 x 2160) no HD (1920 x 1080) ngaphakathi ngesilinganiso sohlaka olukhethekayo kusuka ku-1 fps kuye kuma-60 fps kuma-XAVC-I, XAVC-Long, kanye ne-MPEG HD amafomethi. Futhi ngesibuyekezo se-firmware esizayo, ikhamera ngeke ibe nenkinga yokuqoshwa HD kuze kufinyelele ku-180 fps nokukhipha okuyi-16-bit eluhlaza okungu-4K / 2K okufika ku-120 fps.
Ngaphezu kobubanzi obunamandla bekhamera, imibala yayo ethuthukisiwe kanye nezimpawu zokukhanya kufaka i-ISO eyisisekelo engu-800/4000, futhi lokhu kuyasiza kakhulu lapho ubhekene nezimo ezinokukhanya okuphansi noma usebenzisa i-lens ehamba kancane. Isihlungi saso se-elektroniki esingu-7 sokumisa se-elekthronikhi singasebenza kumodi ye-auto noma yencwadi yezandla, silungisa ngokushelela kusuka ku-1/4 kuya ku-1/128 density. The I-PXW-FX9 ikhamera futhi inokubukeka okungafani kombala we-S-Cinetone, okunikeza ithoni efanayo ethambile, ebonakalayo njenge Sonyikhamera ye-VENICE.
The I-PXW-FX9 kufaka nesicucu esihlanganisiwe se-Multi-Interface (MI) futhi iza nebhethri le-BP-U35, ishaja yebhethri le-BC-U1A, i-adaptha ye-AC enezintambo ezimbili zamandla, i-cap cap yomzimba, isibuko esibonakalayo, isilawuli kude, nentambo ye-USB. Le khamera ibuye ihambisane ne-XDCA-FX9 eyengeza i-unit eyakhiwe ngokwahlukana kwayo, futhi ihlinzeka ngokusekelwa kwesitayela samahlombe se-ENG, izici zokuxhumana kwenethiwekhi, kanye nesitaki somamukeli womsindo ongenazintambo.
Ngeminye imininingwane mayelana I-Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Full-Frame Camera System, vakashela www.bhphotovideo.com/c/product/1506002-REG/sony_pxw_fx9v_pxw_fx9_xdcam_6k_full_frame.html/ukubuka konke.
Lokho uB & H abangakwenzela Abasakazi
Ngokufakwa kwe I-PXW-FX9, abasakazi banokuningi abangakuthola kumikhiqizo ngaphakathi B & H's umugqa wokusungula. Eminye yale mikhiqizo ifaka phakathi I-Rode PodMic Dynamic Podcasting Microphone, okuyikhwalithi yokusakaza, imakrofoni eguqukayo eyenziwe yaba yi-podcasting. Inomsindo ocebile, olinganiselayo, onesihlungi sangaphakathi sangaphakathi nokwethuka kwangaphakathi okwenyukayo ukunciphisa vibration.
Amathuba angeziwe abasakazi angatholakala ngokusebenzisa izinkampani I-HP 15.6 ″ ZBook 15 G6 Workstation Yeselula, okuyisizukulwane esilandelayo se-HP ZBook 15 G6 & HP ZBook 17 G6. Lawa yilaptop aphelele abaqambi, abahleli bevidiyo, nabadali be-VR abadinga ukusebenza kwe-desktop, futhi banikeza abasebenzisi inkululeko yokusebenzela kunoma iyiphi imvelo.
B & H usenomlando omude osuhlale cishe iminyaka engamashumi amahlanu. Ngaleso sikhathi, sekuzibonakalisile ukuthi kungumthengisi wezinto eziholayo we-video, futhi iphumelele emandleni ayo okuhlinzeka abaculi, abathwebuli bezithombe, nezinye izinhlobo ezahlukahlukene zochwepheshe bokuqamba namanye amathuluzi wevidiyo angcono kakhulu imboni yezokusakaza angakhulisa ngawo . Imikhiqizo efana i-PXW-FX9 noma I-Rode PodMic Dynamic Podcasting Microphone umane nje ungumsuka we-iceberg.
Ukuthola eminye imininingwane nge-B&H, vakashela www.bhphotovideo.com/.
B & H Ukwahlukaniswa kweB2B Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe imboni yokusakaza ochwepheshe bezokusakaza Uhlelo Olugcwele Ikhamera I-firmware ye-FX9 I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor imishini yokukhiqiza imidiya Isikhombi Soxhumanoningi i-podcasting I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 I-Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Ama-spears nama-Arrows I-Ultra HD Forum I-VENICE firmware okuqukethwe kwevidiyo Umlingisi wevidiyo esingokoqobo virtual 2020-05-15
Ngaphambilini: I-Global Global yokusakaza: Ithuthukisa Amapulatifomu okusakaza nge Ukuncipha Okuphansi, Isikali Esiphakeme, kanye ne-TCO engezansi
Olandelayo: Fall 2020 Adjunct Ubuso, iThelevishini Kokukhiqizwa Kwevidiyo